အခါသင်ရဲကိုခေါ်သင့်ပါတယ်? | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အရေးပေါ်လည်းမရှိတဲ့အခါဘာလုပ်ရမှန်းသိရန်ကောင်းလှ၏. Knowing when to call the police is important. သငျသညျရဲမခေါ်တဲ့အခါမှာ, သင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးကူညီခြင်းနှင့်လည်းကောင်းတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.
Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. သို့သော်, the police want to help prevent crime.
To call the police, dial 911. အေးဆေးတည်ငြိမ်ရှိနေဆဲတောင်းဆိုလာသောအခါသင်၏နာမကိုပေး, လိပ်စာ, နှင့်ဖုန်းနံပါတ်. If you are usingacellphone, သင့်ထံမှတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ပြည်နယ်နှင့်မြို့သည်. ထိုအခါသင်သည်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အဘယ်ကြောင့်လူတစ်ဦးကိုပြောပြ. Follow any instructions you are given. ဥပမာ, the dispatcher might say, “Stay on the line,” သို့မဟုတ် “Leave the building.”
Most American police departments haveacommunication center. The communication center staff reach police officers onaradio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars haveacomputer linked toanetwork. The computer allows them to view vehicle information, ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းများ, နှင့်အခြားအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များ.
ဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိ, သို့မဟုတ်ရဲအရာရှိများ, ၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ကို enable လုပ်ဖို့အချို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားကြသည်. They have wide-ranging responsibilities.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးလေးနက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိသည့်အခါ, အရာရှိတစ်ဦးကလူတစ်ဦးလက်ထိတ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဖမ်းနိုင်ပါတယ်. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken andasuspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူး, လူသတ်မှု, နှင့်လုယက်မှု. အဆိုပါအထိန်းသိမ်းခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးရဲစခန်းခေါ်သွားတစ်ခုသို့မဟုတ်အာမခံပေါ် မူတည်. ထောင်ချလိမ့်မည်.
ရဲအရာရှိများအထဲကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း policing ကြသောအခါ, ၎င်းတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါပဲ. သူတို့အလုပ်သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများနှောက်ယှက်မယ်ထားတဲ့အပြုအမူတွေကိုတားဆီးပါဝငျ. Prevention ranges from intervening inafight to stopping loud music playing. ဤအမှုကိစ္စများတွင်အခွအေနသမ္မာသတိနှင့်အတူထက်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ကိုင်တွယ်နေသည်. သို့သော်, ဤအခွအေနမြေားပညတ္တိကျမ်းကိုခြိုးဖောကျနိုငျသောအခါသာဓကရှိစေခြင်းငှါ,.
Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. ကွဲပြားခြားနားသောအေဂျင်စီများပြစ်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်. အေဂျင်စီများသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်:
Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI က), အဆိုပါမူးယစ်ဆေးစတင်အာဏာတည်အုပ်ချုပ်ရေး (DEA), အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Marshals Service, နှင့်အခြားသူများအကြားအကျဉ်းထောင်များ၏ဖက်ဒရယ်ဗျူရို.
State agencies provide law enforcement services across their state. ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်ပြည်နယ်ကင်းလှည့်တို့ပါဝင်သည် - သူတို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကင်းလှည့်ဟုခေါ်တွင်စေခြင်းငှါ. ကက်ပီတောလ်ရဲကို, ကျောင်းကကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့, နှင့်ဆေးရုံရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အေဂျင်စီအောက်မှာလည်ပတ်အခြားအခက်များဖြစ်ကြ၏.